musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Czechia Breaking News » Prague Airport Board of Directors inosarudza Sachigaro mutsva
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Komisheni yeHurumende yakasarudza VaPos semunhu akafanirwa kukwikwidza muthenda yaidaidzirwa chinzvimbo ichi.
Jiri Pos akasarudzwa Sachigaro wePrague Airport Board of Directors.
Kusarudzwa kwake kwakatenderwa neVashandi Sarudzo Dare reCzech Republic.
Kusarudzwa kwake kwakakurudzirwa nebazi rezvemari reCzech Republic.
Nhasi, Jiří Pos akasarudzwa Sachigaro wePrague Airport Board of Directors nenhengo dzeBhodi. Saka anotora chinzvimbo cheSachigaro weBhodi reVatungamiriri venzvimbo huru yepasi rese yendege muCzech Republic, kutanga 30 Nyamavhuvhu 2021.
Kusarudzwa kwake mukutungamira kwekambani kwakatenderwa neVashandi Vanosarudza Komiti yeCzech Republic Hurumende muna Nyamavhuvhu 2021, zvichitevera kurudziro yeHurumende Yezvemari yeCzech Republic, iye oga mugovani wekambani. Komisheni yeHurumende yakasarudza VaPos semunhu akafanirwa kukwikwidza muthenda yaidaidzirwa chinzvimbo ichi.
Jiří Kraus anoenderera mberi nekuita basa reVice Sachigaro weBhodi revatungamiriri.
Iyezvino nhengo ina Prague Airport Dare revatungamiriri rasangana nhasi pamusangano unoshamisa wesangano repamutemo kuvhota sachigaro waro. Jiří Pos yakatenderwa. “Handivimbise zvisingaite mukati memazuva matatu uye mashura panguva imwechete. Nekudaro, ini ndine chokwadi chekuti tinogona kushandisa kugona kwePrague Airport kugadzirisa kudzoka kwayo kuita purofiti nekusimudzira kuenderera mberi kwayo nekugutsikana kwevatakurwi, vatinoshanda navo bhizinesi, uye muridzi, nepo zvakasikwa, tichifunga nezve zvinokanganisa nharaunda matunhu akakomberedza nematunhu eguta rePrague. ”
Jiří Pos anodzokera ku Prague Airport mushure memakore manomwe. Akatanga kujoina kambani muna 2006. Kubva 2011 kusvika 2014, aive Prague Airport Sachigaro weBhodi revatungamiriri uye CEO. Kubva 2014 kusvika 2015, aive nhengo yeBhodi revatungamiriri veCzech Aeroholding Group. Mushure mekusiya Boka, akateedzera rake bhizinesi zviitiko, zvakanyanya mumunda wevamiriri vevateereri uye kutenderera. Kubva 2019 kusvika 2021, akashanda seMunyori weKarlovy Vary Airport. Akatanga basa rake rekubhururuka kuCzech Airlines, kwaakagara kwemakore makumi maviri. Akatanga basa rake rekubhururuka muna 1986, achishandira Czech Airlines, kwaakagara kwemakore makumi maviri. Akatanga kushandira maCzech nyika anotakura emahofisi ekune dzimwe nyika kubva 1994 kusvika 2001. Zvino, aive kambani Mutevedzeri wemutungamiri wenyika achitarisira Ground Operations kubva 2003 kusvika 2006. Akapedza kudzidza kuCzech technical University muPrague, iyo Faculty yeMechanical Engineering, iine hunyanzvi mumunda wekugadzirwa kwendege economics.
Prague Airport Board of Directors kubvira 30 Nyamavhuvhu 2021:
Jiří Pos - Sachigaro weBhodi revatungamiriri
Jiří Kraus - Mutevedzeri Wachigaro weBhodi revatungamiriri
Jakub Puchalský - Nhengo yeBhodi revatungamiriri
Jiří Černík - Nhengo yeBhodi revatungamiriri